2 Madzimambo 24:1-20
24 Pamazuva ake, Nebhukadhinezari+ mambo weBhabhironi akauya, naizvozvo Jehoyakimu akava mushandi wake+ kwemakore matatu. Asi akachinja, akamupandukira. 2 Jehovha akatanga kumutumira mapoka evapambi evaKadheya+ nemapoka evapambi evaSiriya nemapoka evapambi evaMoabhi+ nemapoka evapambi evanakomana vaAmoni, akaramba achiatuma kuzorwisa Judha, kuti avaparadze, maererano neshoko raJehovha+ raakanga ataura achishandisa vashumiri vake vaprofita. 3 Izvi zvakaitika kuJudha nokuti zvakanga zvarayirwa naJehovha, kuti avabvise+ pamberi pake nokuda kwezvivi zvaManase,+ maererano nezvose zvaakanga aita; 4 uyewo nokuda kweropa risina mhosva+ raakanga ateura, zvokuti akazadza Jerusarema neropa risina mhosva, uye Jehovha akaramba kumukanganwira.+ 5 Mamwe mabasa ose aJehoyakimu+ nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 6 Jehoyakimu akazorara nemadzitateguru ake,+ mwanakomana wake Jehoyakini akatanga kutonga panzvimbo pake. 7 Mambo weIjipiti haana kuzobudazve+ munyika yake,+ nokuti mambo weBhabhironi akanga atora zvose zvaiva zvamambo weIjipiti,+ kubvira kumupata une rukova+ weIjipiti kusvikira kurwizi rwaYufratesi.+ 8 Jehoyakini+ akanga aine makore gumi nemasere paakatanga kutonga, uye akatonga kwemwedzi mitatu ari muJerusarema.+ Amai vake vainzi Nehushta mwanasikana waErinatani wokuJerusarema. 9 Iye akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha, maererano nezvose zvakanga zvaitwa nababa vake.+ 10 Munguva iyoyo vashandi vaNebhukadhinezari mambo weBhabhironi vakauya kuJerusarema, zvokuti guta racho rakakombwa.+ 11 Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akauya kuzorwisa guta racho, vashandi vake pavakanga vakarikomba.+ 12 Jehoyakini mambo waJudha akazobuda achienda kuna mambo weBhabhironi,+ iye naamai vake+ nevashandi vake nemachinda ake nevatariri vake; uye mambo weBhabhironi akamutora mugore rechisere+ ava mambo. 13 Akabva abudisa pfuma yose yeimba yaJehovha nepfuma yose yeimba yamambo+ imomo, akagura-gura midziyo+ yose yendarama yakanga yagadzirwa naSoromoni mambo waIsraeri mutemberi yaJehovha, sezvakanga zvataurwa naJehovha. 14 Akatapa+ Jerusarema rose nemachinda ose+ nevarume vose vakashinga, vaiva nesimba+—akatapa vane zviuru gumi—nemhizha+ dzose nevavaki vemasvingo okudzivirira nawo. Hapana akasiyiwa kunze kwevanhu vakaderera+ vomunyika yacho. 15 Nokudaro akatapa Jehoyakini+ akamuendesa kuBhabhironi;+ uye akatapawo amai vamambo+ nemadzimai amambo nemachinda+ ake nevarume vakuru vomunyika yacho, akaenda navo kuBhabhironi vachibva kuJerusarema. 16 Mambo weBhabhironi akatapawo varume vose vakanga vakashinga, vane zviuru zvinomwe, mhizha nevavaki vemasvingo okudzivirira nawo, vane chiuru, varume vose vaiva nesimba vairwa, akavaendesa kuBhabhironi.+ 17 Mambo weBhabhironi+ akagadzawo babamudiki+ vake Mataniya kuti vave mambo panzvimbo pake. Akabva achinja zita ravo kuti rinzi Zedhekiya.+ 18 Zedhekiya+ akanga aine makore makumi maviri nerimwe chete paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nerimwe chete ari muJerusarema. Amai vake vainzi Hamutari+ mwanasikana waJeremiya wokuRibna. 19 Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha, maererano nezvose zvakanga zvaitwa naJehoyakimu.+ 20 Izvi zvakaitika muJerusarema nomuJudha nokuda kwokutsamwa+ kwaJehovha, kusvikira avabvisa pamberi pake.+ Zedhekiya akatanga kupandukira mambo weBhabhironi.+